Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Maalgelinta dalxiiska ayaa la jaray iyadoo safarro badan loo aaday Hawaii
Wararka Jabinta Hawaii • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Kamaainas • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
U safrida Hawaii
Aqalka Hawaii iyo Senate-ka ayaa shalay u codeeyay in laga takhaluso diidmada qawaaniinta Gover David Ige ee Aqalka Bill 862 qayb weyn oo la xiriirta dalxiiska. Gaar ahaan illaa inta ay gaarsiisan tahay miisaaniyadda Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA), sharcigan wuxuu ka goynayaa miisaaniyadda US $ 79 milyan illaa US $ 60 milyan oo wuxuu yareynayaa waajibaadka iyo waajibaadka Hay'adda.
HTA hadda waxay ku qasbanaan doontaa inay lacag ka codsato sharci dajinta sanad walba sida wakaaladaha kale ee gobolka oo dhan.
Sharciga ayaa u qoondeeya $ 60 milyan oo ka socda Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka ee sanadka maaliyadeed.
Sidoo kale waxaa kujira biilka isbadalo lagu sameeyay canshuuraha hoyga ee kumeelgaarka ah taas oo dalxiisayaasha uga qaalisan doonto inay sii joogaan hoteelada.
House Bill 862 ayaa sidoo kale tirtiraya qoondeynta canshuuraha ku meel gaarka ah ee loo qoondeeyay gobolada wuxuuna u fasaxayaa inay sameeyaan canshuur degenaansho kumeelgaar ah oo degmo ah taasoo aan ka badneyn boqolkiiba 3 marka loo eego canshuuraha hoteellada gobolka ee 10.25 boqolkiiba
Waxay sidoo kale tirtirtay sanduuqa gaarka ah ee dalxiiska ee TAT-ku maal-galiyo waxayna tirtiraysaa xadka xirmooyinka qaarkood ee magdhowga ah ee loogu talagalay madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee HTA laga bilaabo Janaayo 1, 2022. Tani waa isha aasaasiga ah ee HTA.
Intaa waxaa sii dheer waxay baabi'ineysaa ka-dhaafitaanka HTA ee nambarka wax-soo-iibsiga dadweynaha waxayna sidoo kale hoos u dhigeysaa u-qoondeynta canshuuraha ku-meel-gaarka ah ee loo qoondeeyay sanduuqa ganacsiga ee xarunta ganacsiga.
Wakiilka Gobolka Sylvia Luke (D), oo mataleysa Punchbowl, Pauoa, iyo Nuuanu, ayaa sheegtay in diidmada qayaxan ee veto ay muhiimad weyn ku tahay dalxiisayaasha si ay uga caawin karaan bixinta kheyraadka ay adeegsadaan. Waxay tiri Cashuurta ku meel gaarka ah ee Canshuuraha - ama canshuurta hoteelka - kordhinta 3 boqolkiiba ayaa tan fulin doonta. Intaas waxaa sii dheer, canshuurta gawaarida kirada ah waxaa loo kicin doonaa magaca maamulka dalxiiska waara.
Wakiilka Gobolka Gene Ward (R), oo matalaya Hawaii Kai iyo Kalama Valley, ayaa u codeeyay in aan la dulmarin biilka isagoo sheegay in biilku asal ahaan u dirayo HTA fariin ah in aysan jeclayn qaabka ay u maareeyaan qaybtooda dalxiiska Hawaii.